Tommy Lee Jones – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Ad Astra (2019) Unicode ဘရကျပဈရဲ့ ရုပျရှငျဇာတျကားအသဈလာပါပွီ။ဇာတျလမျးနာမညျကတော့ လကျတငျဘာသာစကားလုံးကိုယူထားတာဖွဈပွီး “ကွယျတှဆေီသို့” လို့ အဓိပ်ပါယျရပါတယျ။သိပ်ပံစိတျကူးယဉျရုပျရှငျ စဈစဈပါပဲ။ဇာတျလမျးကတော့ အနာဂတျကာလမှာပေါ့။ လူတှဟော လကမ်ဘာနဲ့ နအေဖှဲ့အစညျးက ဂွိုလျတှပေျေါမှာစခနျးတှဆေောကျပွီး သုတသေနတှေ လုပျနကွေပါပွီ။ဒီ အာကာသ သုတသေနတှရေဲ့ သူရဲကောငျးကွီးတဈယောကျဖွဈတဲ့ဒေါကျတာ ကလဈဖို့ မကျဘရိုကျဟာ အာကာသထဲမှာအသိဉာဏျရှိတဲ့ သကျရှိတှကေို ရှာဖို့ နအေဖှဲ့အစညျးရဲ့ အဆုံးအစှနျထိ သှားရငျးပြောကျဆုံးသှားခဲ့ပါတယျ။၁၀ နှဈကြျောကွာလာတဲ့အခါ အဲဒီပြောကျဆုံးသှားတဲ့ အဖှဲ့ရဲ့ယာဉျစခနျးကနေ ကမ်ဘာနဲ့ဂွိုလျတှအေားလုံးကို အန်တရာယျပေးမယျစှမျးအငျတှေ ထှကျပျေါလာခဲ့ပါတယျ။အဲဒါကွောငျ့ ဒေါကျတာ မကျဘရိုကျကို ရှာဖို့ သူ့ရဲ့ သားဖွဈသူဗိုလျမှူး ရှိုငျ မကျဘရိုကျက အာကာသထဲကို စှနျ့စားခနျးဖှငျ့ရပါတော့တယျ။ဒီရုပျရှငျကတော့ အာကာသထဲကို ခရီးသှားတာတှကေိုသဘာဝကကြမြွငျခငျြရငျ၊ အခကျအခဲတှကေိုရငျတမမနဲ့ ကွညျ့ခငျြရငျ ကွညျ့သငျ့တဲ့ ရုပျရှငျမြိုးပါပဲ။ Credit Review ဒီဇာတျကားကို ဘာသာပွနျပေးသူကတော့ Yoon Sandi Aung ဖွဈပါတယျ Zawgyi ဘရက်ပစ်ရဲ့ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားအသစ်လာပါပြီ။ဇာတ်လမ်းနာမည်ကတော့ လက်တင်ဘာသာစကားလုံးကိုယူထားတာဖြစ်ပြီး “ကြယ်တွေဆီသို့” လို့ အဓိပ္ပါယ်ရပါတယ်။သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ်ရုပ်ရှင် စစ်စစ်ပါပဲ။ဇာတ်လမ်းကတော့ အနာဂတ်ကာလမှာပေါ့။ လူတွေဟာ လကမ္ဘာနဲ့ နေအဖွဲ့အစည်းက ...
Mechanic: Resurrection (2016) Unicode Mechanic Resurrection 2016 ဒီဇာတျကားဟာ 2011ခုနှဈက ထှကျတဲ့ The Mechanic ဇာတျကားရဲ့ အဆကျ(sequel)ဖွဈပါတယျ The Mechanic (2011)တုနျးက အဲ့ဒီနာမညျနဲ့ပဲ 1972ခုနှဈကထှကျတဲ့ဇာတျကားကို Remake(ပွနျရိုကျ)လုပျခဲ့ခွငျးဖွဈပွီး ဘတျဂကျြအနနေဲ့ 40 million $ အသုံးပွုခဲ့ကာ Box Office မှာ 76.3 million $ ရရှိခဲ့ပါတယျ အခု 2016မှာ ထှကျတဲ့ Mechannic Resurrectionဇာတျကားကတော့ အရငျဇာတျကားစံခြိနျကိုခြိုးပွီး 40 million $ အသုံးပွုကာ 125.7 million $ အထိ ရရှိအောငျမွငျခဲ့တဲ့ မငျးသားကွီး Jason Stathamရဲ့ Action,Adventure,Crime အမြိုးအစား ဇာတျကားကောငျးတဈကားဖွဈပါတယျ ဇာတျလမျးအကဉျြးကတော့ နာမညျကြျော ကြှမျးကငျြလုပျကွံ သတျဖွတျရေးသမား Arthur Bishop တဈယောကျ The Mechanic (2011) ဇာတျကားမှာတုနျးက ...
IMDB: 5.7/10 69,306 votes
Heaven & Earth (1993) Unicode ဗီယကျနမျစဈပှဲအတှငျး အမရေိကနျလူမြိုးစဈသားနဲ့ ဗီယကျနမျအမြိုးသမီးတို့ ခဈြကွိုးသှယျပွီး ဘယျလိုဇာတျလမျးတှဖွေဈလာမလဲဆိုတာကွညျ့ရမညျ့ဇာတျကားကောငျးပါ။ Zawgyi ဗီယက်နမ်စစ်ပွဲအတွင်း အမေရိကန်လူမျိုးစစ်သားနဲ့ ဗီယက်နမ်အမျိုးသမီးတို့ ချစ်ကြိုးသွယ်ပြီး ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတာကြည့်ရမည့်ဇာတ်ကားကောင်းပါ။
IMDB: 6.8/10 12,395 votes
Men in Black II (2002) Men In Black အတွဲ ၂ လေးပါ။ နံပါတ် ၁ မကြည့်ဖူးရင်လည်း ကြည့်လို့ရပေမဲ့ ပိုပြီးကြည့်ကောင်းသွားအောင်တော့ နံပါတ် ၁ ကိုကြည့်လိုက်ပါလို့။ ဒီတစ်ပိုင်းကတော့ ဇာသာ ရဲ့ အလင်းတန်း ကို လိုက်ကယ်တင်တဲ့အခန်းပေါ့။ ဇာသာ နဲ့ ကိုင်လိုသီယမ် ဂြိုဟ်နှစ်ခုရဲ့တိုက်ပွဲမှာ ကျွန်တော်တို့က ကန့်လန့်ပါသွားတာပေါ့နော်။ MIB ထုံးစံအတိုင်း ဂြိုဟ်သားတွေနဲ့ ပစ်မယ် လက်နက်အဆန်းတွေပါမယ် ဟာသလေးတွေလည်းပါမယ်ဆိုတော့ ထပ်ညွန်းစရာမလိုလောက်တော့ပါဘူးနော်။ ပရိသတ်ကြီး Down လိုက်တော့နော်။ ။ Credit Review
IMDB: 6.2/10 318,245 votes
Men in Black (1997) Will Smith ရဲ့ MIB (၁၉၉၇) ဗားရှင်းလေးကြည့်ကြမလား။ အားလုံးသဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်။ အခုလည်း MIB ကားသစ်လေးလာအုန်းမယ်ဆိုတော့ ပြန်နွေးကြည့်ကြတာပေါ့နော်။ စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်ဆိုပေမဲ့ ဂြိုဟ်တွေ အကောင်တွေနဲ့ တော်တော်ကြည့်ကောင်းတဲ့ကောင်းလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းပြောရမယ်ဆိုရင် Will ကအခုမှ MIB မှာအသစ်ဝင်တဲ့လူသစ်လေးတစ်ယောက်ပေါ့။ ပိုးကောင်အကြီးစားကြီးက ဂလက်ဆီ ဆိုတဲ့အရာကို လာယူဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ Will တို့က ဘယ်လိုစွန့်စားပြီး ပြန်ကာကွယ်ယူလာခဲ့တယ်ဆိုတာ ကြည့်လိုက်ပါဦးနော်။ ။ Credit Review
IMDB: 7.3/10 481,626 votes
Small Soldiers (1998) မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ၊ Small Soldier ဟာ 1998 မှာ ထွက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပြီး အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေအကြား ရေပန်းစားခဲ့တဲ့ Movie လေး တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အရာရာတိုင်းမှာ အကောင်းနဲ့ အဆိုးဆိုတာ အမြဲဒွန်တွဲတည်ရှိနေတတ်သလို... ဘယ်လိုမှ ထင်မှတ်ထားစရာမရှိတဲ့ သက်မဲ့အရုပ်ကလေးတွေမှာတောင်မှ လူသားတွေရဲ့ ပယောဂကြောင့် အချင်းချင်း တိုက်ခိုက်ကြပုံတွေကို စိတ်ကူးယဉ်ဆန်စွာ ရိုက်ကူးထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ခေတ်ဟောင်းအရုပ်ဆိုင်တစ်ဆိုင်က. ၁၅ နှစ်အရွယ် လူငယ်လေး Alan ဟာ.. လူစိတ်ဝင်စားမှု မရှိတော့တဲ့ သူ့အဖေရဲ့ အရုပ်ဆိုင်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး... ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ သူဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီလို အခိုက်အတန့်မှာ နာမည်ကျော် electronic ထုတ်ကုန်တွေ ဖြန့်ဖြူးတဲ့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုက အရုပ်ဒီဇိုင်းပညာရှင်နှစ်ယောက်ဟာ အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့ ကစားစရာအရုပ်ကလေးတွေ တီထွင်ဖန်တီးပြီး ဖြန့်ဖြူးလိုက်ပါတယ်။ သူတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ကွဲပြားတဲ့ စိတ်နေသဘောထားအရ... ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ အရုပ်ကလေးတွေလဲ သွင်ပြင်တွေ ...
IMDB: 6.1/10 85,770 votes